एक महिलाले आफ्ना पूर्वप्रेमीविरुद्ध अनौठो उजुरी गरेकी छिन् । पूर्वप्रेमीको लिंग असाधारण किसिमले लामो हुँदा आफ्नो योनीमा क्षति पुगेको उनको दाबी छ । सिलिण्डाइल मान्गेना नामकी २९ वर्षीया महिलाले ३७ वर्षका पूर्वप्रेमी मुगोभ कुरिमाविरुद्ध मुद्दा हालेकी हुन् । ती महिलाका अनुसार उनी उक्त क्षतिविरुद्ध शल्यक्रिया गर्न गइरहेकी छिन् । तर उनले यसको खर्च भने पूर्वप्रेमीले नै भर्नुपर्ने दाबी समेत गरेकी छिन् । यसको खर्च ८ हजार...
कसैले अंकमाल गरेर पनि पैसा कमाउँदो रहेछ । एकजना महिलाले पैसा कमाउनका लागि यो अनौठो कामको अन्वेषण गरेकी छन् । पछिल्लो समय एकजना महिला इन्टरनेटमा भाइरल बनिरहेकी छन् । उनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ओछ्यानमा केवल अंकमाल गरेर सँगै सुत्छिन् । निकै प्रेमभावमा अंकमाल गरेर सुताएबापत उनले प्रतिघण्टा ८० डलर अर्थात् झण्डै ८ हजार शुल्क लिन्छिन् । अमेरिकाको केनजस सहरकी ती महिलाको नाम मेरी हो ।...
महिलाका लागि डिजाइन गरिएको सेक्स टोयलाई प्रतिबन्धित :
अमेरिकाको लस भेगासमा आयोजित सन् २०१९ को कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (सीईएस) बाट महिलाका लागि डिजाइन गरिएको एउटा सेक्स टोयलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ । इन्नोभेसन अवार्ड प्राप्त गरेसँगै सीईएसमा प्रदर्शनीका लागि आमन्त्रित भएको ओसे भाइब्रेटर नामक रोबोटिक सेक्स टोयलाई सीईएसको आयोजक कन्जुमर टेक्नोलोजी एसोसिएसनले प्रदर्शनीबाट हटाएको हो । लोरा डिकार्लो कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त भाइब्रेटर अश्लील भएको र भुलवस त्यसलाई प्रदर्शनीमा समावेश गरिएकोमा पहिलो दिनमै हटाइएको आयोजकको...
फेसबुकको प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गरेको निहुँमा एक प्रेमीले प्रेमिकाको दाँत झारिदिएका छन् भने बंगारा भाँचिदिएका छन् । लिभरपुलका लोइस एसटोनलाई उनका २९ वर्षे प्रेमी एन्ड्रयू म्याकनेयरले यति बेस्सरी हाने कि उनका तीनवटा दाँत भाँच्चिएका छन् । म्याकनेयरलाई उक्त घटनापश्चात् ३६ महिनाको जेल सजाय तोकिएको थियो । प्रेमिकाले दुईजनाको फोटोबाट आफूलाई हटाएर फेसबुकमा आफ्नो मात्र फोटो राखेका कारण उनी रिसाएका थिए । एसटोनले भनिन्, ‘उनी सुरुमा निकै मायालु...
बाख्रा बलात्कार गर्दागर्दै एक पुरुष रंगेहात पक्रिएपछि…
२१ वर्षका एकजना युवक बाख्रा करणी गर्दागर्दै पक्राउ परे । रंगेहात पक्राउ परेपछि ती अभियुक्त युवकले जुन कुराको खुलासा गरे त्यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । आफूले बाख्रासँग यौनकार्य गर्नका लागि अनुमति लिएको दाबी ती युवकले गरेपछि सुन्नेहरु तीनछक परे । यद्यपि उनको दाबी सही थिएन । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । यो अनौठो घटना अफ्रिकी मुलुक मलावीको मचिन्जी भन्ने ठाउँको हो । उक्त गाउँका केनेडी कम्बानी...
ल्याटिन पप किंग भनिने गायक रिकी मार्टिन र उनका पार्टनर आर्टिस्ट ज्वान योसेफको घरमा छोरीको जन्म भएको छ । रिकीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा फोटो पोष्ट गरेर यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले छोरीको हात समातेको फोटो सेयर गर्दै लेखे, ‘हामी एक सुन्दर र स्वस्थ छोरीको आमा–बुवा भएको खबर सार्वजनिक गर्न पाउँदा निकै खुसी भएका छौं । हामीले उसको नाम लूसिया मार्टिन योसेफ राखेका छौं...
पानीको फाउन्टेन जहा पानि हैन रक्सी बग्छ,
तपाईंले आजसम्म कैयन् वटा पानीको फाउन्टेन देख्नुभएको छ होला । तर सबै फाउन्टेनमा एउटा साझा चिज हुन्छ, पानी । आज हामीले तपाइँलाई यस्तो फाउन्टेनको बारेमा बताउँदैछौँ जहाँ पानी होइन, रक्सी निस्किन्छ । उक्त फाउन्टेनमा चौबीसै घण्टा रेड वाइन बग्दछ । इटालीमा यस्तो अनौठो फाउन्टेन रहेको छ । उक्त फाउन्टेनमा पुगी पर्यटकहरुले सित्तैमा वाइन पिउन पाउँछन् । Fontana del Vino नामक उक्त फाउन्टेन इटालीको अलरुज्जा सहरमा...
एक मोडल जो लगाएर नधोएका मोजा, जुत्ता बेचेर कमाउँछिन् एक करोड ४२ लाख!
एक मोडलले आफूले लगाएको मोजा र जुत्ता बेचेर वर्षको एक लाख पाउन्ड (एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ) कमाउँछिन् । कसैले उनको खुट्टा निकै सुन्दर भएको बताएपछि, रोक्सी साइक्स, ३३ ले यसको वास्तविकता जान्ने सोच बनाइन् । लण्डनमा बसेर घरजग्गामा लगानी गर्दै आएकी उनले मानिसहरुले उनको खुट्टामा कत्तिको रुची दिन्छन् भनेर इन्स्टाग्राम पेज बनाइन् । एक महिनामा दस हजार बढी फलोअर पुगेपछि उनले आफ्ना ‘फ्यान’ को कुरा...
डिभोर्स एनिभर्सरी मनाउने नेपालि महिला,भन्छिन पहिला भन्दा एक्दम खुशी छु!
नेपालका चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरलेकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले डिभोर्स एनिभर्सरी मनाएकी छन् । सम्बन्धविच्छेद गरेको एक वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा मिनाले केक काट्दैं डिभोर्स एनिभर्सरी मनाएकी हुन् । उनले नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै बुटिकमा पत्रकार सम्मेलन गरि केक काट्दै डिभोर्सको खुसियाली मनाएकी हुन् । गत वर्ष उनीहरुले डिभोर्स गरेका थिए । ढकालले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दैं आफू स्वतन्त्र भएको एक वर्षको उपलक्षमा वार्षिकोत्सव...
सुन्दा निकै रमाइला लाग्ने सजाय:कार्टुन हेर्ने देखि गीत सुन्नेसम्म……
तपाईंलाई जे गर्न मन लाग्दैन त्यो बाध्यतावश गर्नुपर्छ भने, त्यसलाई सजाय भनिन्छ । अपराधी प्रमाणितलाई पनि अदालतले यही तरिका अपनाएर सजाय तोकेको हुन्छ । तर कुनै सजाय सुन्दा निकै रमाइला पनि हुन्छन् । यहाँ यसबारे जानकारी दिइएको छ । एक शिकारीलाई एक वर्षसम्म जेलमा बसेर महिनामा कम्तीमा एकपटक डिज्नीको बम्बी कार्टुन हेर्नुपर्ने सजायँ दिइयो । अमेरिकाको मिसौरीमा बस्ने डेविड बेरीलाई मृगको शिकारमा दोषी पाइएको थियो । कार्टुन...